Orinasa fantsom-pahefana herinaratra - mpanamboatra andian-tsarimihetsika fantsom-bokatra China
HFB tokana herinaratra rindrina tokana
Fanamafisana mahatohitra hafanana, azo antoka ary azo itokisana: ny akora main'ny fantsom-panafody dia novaina polypropylene, izay manana fananana insulation tsara ary mbola afaka mitazona fanoherana tsara ny tsindry ivelany amin'ny mari-pana ambony. Izy io dia mety ho akanjo fiarovan-tena ho an'ny tadin'ny herinaratra avo lenta. Tensile sy fanoherana tsindry, henjana ary malefaka: Manana fanoherana mahery vaika kokoa izy io, fanoherana ny tsindry ivelany ary malefaka kokoa. Ny fifandraisana dia voaisy tombo-kase amin'ny clamp, izay mety ...
IFB hidoboka ny herin'ny rindrina indroa
Ny lohan'ny rindrina IFB ao anaty rindrina, fantatra ihany koa amin'ny famoahana herinaratra rindrina miorina amin'ny rindrina CM, dia manana endrika firafitra vaovao, rafitra tsy manam-paharoa, fanoherana ambany ny fikorontanana, fahalemena tsara, fanoherana ny hafanana avo, fihenjanan'ny peratra avo, ary tsy mora ny manapaka sy taona. Ny rindrina ivelany dia firafitra boribory tsy misy lavaka, mampiasa feno ny fotokevitra I-vy mba hanatsarana ny inertia mahitsizoro ny fizarana hazo fijaliana, ary ny rindrina anatiny dia tena malama, izay manatsara ny fahombiazan'ny kofehy ...
Palitao tariby tsy mihady MPP
Endri-javatra vokatra 1 、 Manana fahombiazan'ny insulation elektrika tena tsara. 2, Manana mari-pana fanodinana hafanana be sy fiakaran'ny maripana ambany, fampiasana hafanana maharitra -5 ℃ -95 ℃. 3, Hery mahery mivaingana avo lenta an'ny peratra peratra, fahombiazan'ny famoretana avo lenta, fanoherana fanoherana mahery vaika. 4, Mavesatra maivana, mora apetraka amin'ny fifandraisana mafana. 5, fiainana maharitra amin'ny fantsom-pitaterana maharitra, fiainana serivisy azo antoka mihoatra ny 60 taona. 6 、 Azo averina averina ampiasaina sy ampiasaina indray izy io ary tsy handoto ny tontolo iainana ...
Palitao tariby herinaratra CPVC
Ny fananana ara-nofo CPVC fantsona herinaratra dia mampiasa ny resin PVC-C ho fitaovana lehibe amin'ny fanoherana ny hafanana sy ireo toetra azo antoka tsara. Ny vokatra CPVC dia ekena ho vokatra fiarovana tontolo iainana maitso. Ny fananan'izy ireo ara-batana sy simika tena tsara dia mahaliana hatrany amin'ny indostria. Ny fantsom-pahefana CPVC dia fantsom-piraikitra henjana mahitsy misy rindrina anatiny sy ivelany milamina, loko mena-mena, loko mamirapiratra ary manintona ny maso. Ny fantsom-pahefana CPVC fanoherana hafanana dia manana 15 ...